Weerar lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga Afghanistan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Weerar lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga Afghanistan
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay weerar culus oo lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga Afghanistan ee ku yaalla Kabul.
Bismillah Khan Mohammadi ma uusan joogin gurgiisa xilli dabley ay isku qarxiyeen baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ay la beegsadeen goobta amnigeeda sida weyn loo adkeeyo ee aagga cagaaran.
Qoyska wasiirka ayaa laga daadgureeyay guriga, waxaana la dilay afar kamid ah dableydii weerarka soo qaaday, sida ay sheegeen saraakiisha.
Kooxda Taalibaan waxay sheegtay inay ka dambeysay weerarka.
Waxaana lagu soo warramaya in 20 qof ay ku dhaawacmeen weerarka.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 04-8-2021
Next articleGo’aano laga soo saaray askarta Shacabka dhexdooda rasaasta ku rida